Nice Help | Taageerada aan macaash doonka ahayn
Sanduuqa Waxqabadka Bulshada
Aaga Fanka Aagga FM
Ahmiyadaha deeqaha laga helo Sanduuqa Waxqabadka Bulshada waxaa ka mid ah:
Caawinta ururada aan faa iido doonka aheyn ee sida tooska ah ugu howlan wax ka qabashada baahiyaha ka jira Cass-Clay, gaar ahaan dadka nugul, sida dadka ay la soo daristo hoy la’aan, dadka dakhligoodu hooseeyo, dadka naafada ah iyo kuwa maskaxda ka liidan, dadka waayeelka ah, dadka aqoonta Ingiriisiga xaddidan leh, dadka wajaha dhibaatooyin adag awgeed. shaqo lumis ama hoos u dhac, iwm.
Horumarinta wanaaga bulshada ee laqabsashada iyo bogsashada, oo ay kujirto horumarinta dhalinyarada iyo adeegyada caafimaadka maskaxda.
Santuukha Gargaarka NWNDCF
Haayada Bulshada Waqooyiga bari ee North Dakota
Sanduuqa Relief wuxuu bixin doonaa taageero la xaqiijiyey oo aan la xaqiijin karin, ururada bulshada, iyo kooxaha mutadawiciinta ah ee si toos ah wax uga qabanaya baahiyaha dadka ay saameeyeen culeyska dhaqaale ee gaaska iyo gaaska iyo COVID-19. Tusaalooyinka baahi degdeg ah waxaa ka mid ah:
Helitaanka cuntada. Iyada oo xidhitaankii u dambeeyay ee dugsiga, caruur badani ay ka maqantahay adeegga cuntada ee maalinlaha ah iyo helitaanka barnaamijyada boorsada ee dhammaadka usbuuca. Intaa waxaa sii dheer, qaar badan ayaa helaya iyaga oo aan heysan dakhli iyo awood ay ku iibsadaan raashinka iyo ururada bixiya cuntooyinka waayeelka ah ay culeys badan saareen baahida.
Caawinta waaxda adeegyada aadanaha. Qoysas badan ayaa ubaahan xanaano caruur iyo adeegyo kale oo taageera.
Caawinta waaxda daryeelka caafimaadka. Coronavirus wuxuu caqabado gaar ah u leeyahay waxbarista, baarista, iyo daaweynta bukaannada.
Hay'adaha Caawiya Shaqsiyaadka & Qoysaska Is-gooniyeeynta Caabuqa Coronavirus. Joojinta faafitaanka COVID-19 waxay muhiim u tahay sii wadidda caafimaadka iyo ladnaanta saaxiibbadayada iyo derisyada oo aan gaabinno saameynta ay ku leedahay dhaqaalaheena.
Bixinta Jawaab-celinta tooska ah ee open road allaince ugu talagashay Caabuq Covid-19
Kuma : Hay'adaha ku lugta leh ka jawaabista tooska ah ee COVID-19. Waxaan mudnaan siin doonaa ururada iyo howlaha doorka cad ee tooska ah ka leh 'fidinta qalooca' sidaas darteedna xaddidaya, gaabiyey, ama yareynaya dhaqaalaha iyo bulshada, iyo sidoo kale saamaynta caafimaad ee masiibada.
Sabab : Yaraynta iyo joojinta fidinta COVID-19 waxay si toos ah ula xiriirtaa yareynta iyo yareynta xaddiga dhaqaale iyo bulsho ee bulshooyinkeennu la kulmayaan.
Maxay : Deeqaha sadaqada
Baahida lacageed ee hal-mar ah
Ilaa $ 100,000 USD
Juqraafi kasta iyo qayb kasta, ayaga oo soo bandhigaya waxay muujin karaan inay si toos ah ugu tabarucayaan 'qurxinta qallooca' ee beeshooda.
Muhiimadda koowaad, si muuqata, iyo saameyn qoto dheer.
Haayada Bush waxay siisaa deeqo Innovation Community ah $ 10,000 ilaa $ 200,000.
Waxaan dedejin doonaa tixgelinta barnaamijyada deeqda Innovation ee wax ka qabta xaaladaha degdegga ah, oo ay ku jiraan mashruucyada la xiriira COVID-19.